ကိုဖြိုး(နည်းပညာ): Photoshop Cs 3(full version)
ဖတ်ထား၊မှတ်ထား သမျှလေးတွေ ပေါ့။
Photoshop Cs 3(full version)
photoshop CS3 (full version) လေးပါ။လိုချင်သူများ
Posted by ko phyo at 9:56 AM
LeEco X500 1S Root + Myanmar Font - *Download Files* Password = tta 1. unlock bootloader fastboot oem unlock 2. flash boot file magisk boot 3. install magisk manager root done after root don...
RBSoft mobile tool cracked v1.6 - 9008 က​​နေ oppo A37f pattern lock ​လည်းပြုတ်​တယ်​။ frp lock လည်း​ဖြည်​လို့ရတယ်​။ Mi account ​တော်​​တော်​စုံစုံလည်းဖြုတ်​လို့ရတယ်​။ အခြား qualcomm ဖုန်​...
ကျော်ကမ္ဘာ(Full Version Software)
- SpyHunter4Crack Patch and keygen are Here [Latest] We just update spyhunter torrent Get Latest Spyhunter4Crac...
Xperia Firmware စုစည်းမှု (latest 2010 to 2014 ) - SONY download link from Google Drive Xperia 2010 Xperia X8 (Android 2.1) E15i Xperia X10 (Android 2.3.3) X10i Xperia X10 Mini (Android 2.1) E10i Xperia X10...
C8813 Step2 Failed Error ရှင်းဖို့ - ဒီကောင်လေးကတော့ ကြာပါပြီနော် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. C8813 မှာ online update တင်မိပြီး build no.173/175 တို့ကိုတင်မိပြီဆိုရင်1500 Sim Card ကိုမသိတော...
TeamViewer Portable 8.0.18051 - TeamViewer လေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိပြီးသားလေးပါ Latest Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Portable လေးဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ Memory Stick ထဲဆောင် ထားပြီးမည်သည့်စက် ...
The Time Machine Hidden Object v1.0 Apk - ဒီTime Machine လေးကိုအခုမိမိရဲ့ဖုန်းမှာထည့်သွင်းထားပြီးကိုလ်သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရပါပြီ။ ဇတ်လမ်းလေးကဒီလိုလေးပါ။ ပရော်ဖက်ဆာGeorge Einwin ကသူ့ကိုသူအပြ...
Min Soe Yar Sar (-M^S^Y^S-)
soe moe's blog
Zealot Free Mobile Sharing
ဘောလုံးပွဲ ပေါက်ကြေး APK
ဘောလုံးပွဲ ရာသီ ရောက်လာတော့ ဘော်ဘော်တို့ အကြိုက် ပေါက်ကြေးလေးတွေ ကြည့်နိုင်ဖို့ shwe ဆိုဒ်ရဲ့ ပေါက်ကြေးလေးတွေကို online apk လေးလုပ်ပေးထားတာပ...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်သွား ပျောက်သွားတဲ့ ဆော့ဝဲ၊ ပုံတွေ သီချင်းတွေ ကို ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့အမြန်ပြန်ရှာလို့ ရပါတယ် ဖုန်းကနေ မှားဖျက်တ...
Android phone တွေမှာ Download Speed ကို မြင့်ကြည့်ရအောင်
ဒီနည်းလေး က လွယ်ပါတယ် လွယ်လွန်းလို့ကို မပြောဖြစ်တာ အခု သတိရလာလို့ ပိုစ့်တစ်ခု ရေးတင်ပေးလိုက်တာပါ အခု ကျွန်တော် ပြောပေးမယ့်နည်းလေးက Download ...
တရုတ်တပ်ပလက်တွေကို Firmware တင်နည်း
အစရှာမရတဲ့ တရုတ်တက်ဘလက်တော်တော်များများကို Firmware ပြန်တင်နည်း နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ဗျာ :P ဟီး (၂) ရက်လောက်ပေါ့ သေချာအောင်စမ်းနေလို...
Advanced Karaoke Player V4.2 full version ( 25 MB )
ကာရာအိုကေ ဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အစ်ကိုအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီဗျာ...အပီအပြင်ဟဲ နိုင်ပါစေခင်မျာ Download=>Solidfiles / Mediafire The Best Musi...
ဖုန်းနံပါတ်ဖြောက်၍ ဖုန်းခေါ်နည်း (for andriod phone)
ဖုန်းနဲ့ ပါတ် ဖြောင့်၍ ဖုန်းခေါ်နည်းလေးပါ...။အသုံးလိုတဲ့သူသုံး နိုင်အောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ personal call, secret call အစရှိတဲ့ ခေါ်ဆိုမ...
Y210,Y210C,Y210S အားလုံးကို One Click နဲ့ Root,မြန်မာစာ အကုန်ထည့်မယ်
အရင်ဆုံးဒီဖိုင်လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။ Y210 Series One Click Root Fonts(Setup).rar Download=> Link 1 / Link2ကဲပြီးသွားရင်တော့...
Firefox ကို ဖလူးဖလူးထအောင် မြန်ကြမယ်..
￼ zawlin: mozilla firefox မြန်အောင် လုပ်တဲ့ နည်းလေးတင်ပေးပါလား အကို.... ကျွန်တော် တစ်ခါတင်တင်ပြီးပါပြီ.. မိတ်ဆွေမဖတ်မိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်....
Subtitle Edit 3.3.3 ဟာ Video တွေမှာ Subtitle လို့ခေါ်တဲ့ စာတန်းထိုးလုပ်တဲ့ Software ပါ.. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ် စတဲ့ ဘာသာအလိုက်...
ယနေ့ခေတ် IT ကမ္ဘာက လူငယ်များအတွက်ကတော့ Game ဆိုတာဟာ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ အသည်းစွဲပါ။ X Box, Wii Game, Sony, Apple i-...
Htain Lin Aung
Android ပေါ်မှ ဖတ်ရန်
IDM 7(full version)
TuneUp(2012 Full version)
AutoCad 2012 (မြန်မာလို)
vzo chat ပါဒေါင်းလုပ်ယူရန်
သင့်ရဲ့ IP လိပ်စာလေးပါ
မူရင်း ကိုဖြိုး. Powered by Blogger.